Ike sitere na mmiri mmiri | Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green
Ike sitere na mmiri mmiri
Adrian | | Igwe ọkụ, Ike imeghari ohuru, Hydrogen
Maka obodo niile nke ụwa a nsị mmiri Ha bụ nsogbu bụ isi ha ga-eche ihu site na ịwụnye ọgwụgwọ osisi maka debugging. Mana afọ ole na ole ugbu a, a na-enyocha ma mepụta teknụzụ, usoro na sistemụ nke na-eji ihe mkpofu a eme ihe dị ka ntọala maka imepụta ume.
Enwere ike iji mmiri mmiri dị iche iche dị ka inweta biogas, ọkụ eletrik, ikuku oyi na-ekpo ọkụ mgbe niile site na mmiri, ọkụ eletrik nke nje dị na n'efu na ndị ọzọ
Ihe atụ ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ ugbu a bụ:
N'obodo Wolfsburg na Germany o nwere sistemụ na-enweta ume site na mkpofu mmiri nke a na-enweta biogas nke eji ya na osisi n'onwe ya, enwere ike ịnweta compost maka ọrụ ugbo.
N’obodo Basel, Switzerland, a na-arụpụta teknụzụ na-ewepụta okpomọkụ sitere na mmiri na-asọ mmiri nke na-agabiga ọgwụgwọ mkpocha. A na-emegharị okpomọkụ a maka kpo oku. Experiencesdị ihe a mere na Jamanị.
Na United States, oru na teknụzụ dị iche iche na-arụ ọrụ iji nweta uru nke methane nke a na-emepụta site na ịgwakọta mmiri mmiri na ihe mkpofu ahịhịa. A na-enweta methane site na microorganisms nke na-emebi ihe mkpofu na gas na-emepụta.
Methodszọ ndị ọzọ iji nweta ume bụ imepụta sel nke mmanụ ikuku. Usoro ahụ nwere microorganisms nke na - eme ka ahịhịa ahịhịa mmiri nke mmiri mmiri na - ewepụta elektrọn eletrik.
Ndị a bụ ụfọdụ ahụmahụ ndị a na-anwale n'ụwa, iji belata ihe mkpofu sitere na mmiri rụrụ arụ na n'otu oge ahụ mepụta isi iyi ọhụrụ nke ume, ọbụlagodi na ha bụ maka ojiji a kapịrị ọnụ ma ọ bụ nke amachiri.
Ọ dị mkpa ịga n'ihu nyocha, ịmepụta na ịmepụta ụzọ iji mepụta gas, ọkụ eletrik, compost na ọnụ ego dị ọnụ, na-eji usoro ndị ọzọ dịka site na mmiri emetọ.
Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịkwalite na imepụta ụzọ ọhụrụ nke mmepụta ume n'ụzọ obibi, a ga-edozi ọtụtụ nsogbu gburugburu ebe obibi ma gbasaa ike ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Ike ike » Igwe ọkụ » Ike sitere na mmiri mmiri
M na-eguzo ọtọ nke ọma k enwere ọtụtụ ndị nyocha iji nwee ike iji mmiri niile mee ihe n'ihi na ọ na-ewe ọtụtụ, anyị ekwesịghị ịla ya n'iyi na ndị tinyere akụkọ a na-ebili nke ọma, ana m ekele gị nke ukwuu na m tụgharịrị ọtụtụ nke a, mmiri dị ezigbo mkpa maka mmadụ niile.
Kedu ihe ọ ga - adị ka ịmepụta ike sitere na mmiri site na electrolysis na njikọta na mkpụrụ ndụ Hydrogen?
Eco ụlọ na ume ọhụrụ
7 Atụmatụ iji chekwaa ume